Ciidamada badda Puntland oo u dabaaldagay sanadguuradoodii sadexaad(Sawiro) – Radio Daljir
Oktoobar 5, 2013 10:18 b 0
Bosaaso, October 5, 2013 – ?Waxaa maanta xarunta ciidamada badda Puntland ee saldhiga Qaw lagu qabtay munaasbad wayn oo lagu xusayay sanadguuradii sadexaad ee kasoo wareegatay aasaaskii booliska badda Puntland PMPF.
Xafladda ayaa waxaa ka qaybgalay saraakiil ka socotay? laamaha kale duwan ee ciidamada Puntland, waxaana goobta lagu soo bandhigay dhoolatus ay ka qaybgaleen diyaaradaha ciidamada oo maanta xarunta lagu soo bandhigay.
Taliyaha booliska badda Puntland C/risaaq Diiriye oo ka hadlay? munaasabadda ayaa ciidamada ku amaanay mudadii ay jireen inay waxqabad la taaban karo sameeyeen, isagoo usoo qaatay dhinaca amaanka.
Waxaa uu sheegay waxqabadka ciidamadan inay yihiin kuwa laga dareemi karo Puntland, waxaana uu ku amaanay aqlaaq iyo howlkar inay la yimaadeen.
Dhinca waxqabadyada ciidamada mar uu ka hadlay waxaa uu sheegay inay ku guulaysteen howlgallo ka dhan ah burcadbadeeda iyo kalluumaysiga sharci darada ee Puntland oo dad badan ay usoo qabteen.
Xafladdan ayaa sidoo kalle hadiyado lagu gudoonsiiyay qaar ka mid ah ciidamada oo lagu tilmaamay inay ka mid ahaayeen kuwii ugu firfircoona dhinaca shaqada.
Ciidamada badda Puntland ayaa ka mid ah ciidamada Puntland, waxaana tan iyo xiligii la aasaasay sidoo kale ay ka qaybqaadanayeen dhinaca amaanka iyagoona sugay amaanka shirarkii Garoowe 1 iyo Garoowe? 2 ee dalka looga saaray marxaladii KMG ahayd ee uu ku jiray.